Imbali ye-Crash Test Dummies - iSierra Sam
ISierra Sam kunye nosapho lwama-test dummies
Ukuhlolwa kokuqala kokuhlaselwa kwe-dummy kwakuyi-Sierra Sam eyakhiwe ngo-1949. Le ngqungquthela yama-95 ye-percentile ye-crash test dummy yaqulunqwa yiSierra Engineering Co. phantsi kwesivumelwano kunye ne-United States Air Force, ukuba isetyenziswe ukuhlaziywa kwezihlalo ze-airjack e-rocket sled iimvavanyo. "- Umthombo weFTSS
Ngo-1997, i-GM ye-GM ye-Hybrid III ye-crash test dummies ngokusemthethweni yaba ngumgangatho weshishini wokuvavanya ukuthobela imimiselo yempembelelo kaRhulumente kunye nekhuseleko lesikhwama somoya.
I-GM yavelisa esi sixhobo semvavanyo malunga neminyaka engama-20 eyadlulayo, ngowe-1977, ukubonelela nge-biofidelic measurement tool - i-crash test dummies eziziphatha ngokufanayo kubantu. Njengoko kwenzelwe ukuyila kwayo kwangaphambili, i-Hybrid II, i-GM yabelane ngale teknoloji yokugxila kunye nabalawuli bakaRhulumente kunye ne-auto industry. Ukukwabelana kwesi sixhobo kwenziwa ngegama lovavanyo olukhuculweyo lokukhusela nokunciphisa ukulimala komgwaqo kunye nokufa, ehlabathini lonke. Inguqulelo ka-1997 ye-Hybrid III yinto eyenziwa yi-GM kunye nezinye izilungiso. Kubonisa enye into ebalulekileyo ekuhambeni kwe-automaker yokuhamba ngokukhusela. I-Hybrid III yi-state-of-art yokuvavanya iinkqubo eziphambili zokuzikhusela; I-GM isebenzise iminyaka kwimpumelelo yeengxowa zomoya. Inikeza uluhlu olubanzi lweedatha ezinokuthenjelwa ezinokudityaniswa nemiphumo yokuphazamiseka kokulimala komntu.
I-Hybrid III ibonisa ummeli wokumisa kwendlela yokuqhubela phambili nabagibeli bahlala kwiinqwelo.
Yonke into yokuhlaselwa i-dummies ithembekileyo kwisimo somntu abayifanisa - ngobunzima obukhulu, ubungakanani kunye nenani. Iintloko zabo zenzelwe ukuphendula njengentloko yomntu kwindawo ephosakeleyo. Iyingqamaniso kunye nebunzi lijonganisa kakhulu indlela umntu angathanda ngayo xa ebethwa ngquzulwano. Isibonda sesifuba sinesibambo sensimbi yentsimbi efanisa ukuziphatha komatshini wesifuba somntu ekuqhubheni.
Intamo yerabha igoba kwaye ilula i-biofidelically, kwaye amadolo nawo ayenzelwe ukuphendula kwimpembelelo, efana namadolo abantu. I-hybrid III ye-crash test dummy inesikhumba se-vinyl kwaye ixhotyiswe ngezixhobo zobugcisa zobugcisa ezibandakanya i-accelerometers, i-potentiometers kunye namaseli omthwalo. Ezi zilinganise ukukhawuleza, ukuchithwa kunye nemikhosi eyenziwa ngamaqela ahlukeneyo omzimba ngexesha lokunciphisa ukuhlaziya.
Esi sixhobo esiphambili siphucukisiwe ngokuqhubekayo kwaye sakhiwe kwisiseko sesayensi se-biomechanics, idatha yezokwelapha kunye negalelo, kunye nokuvavanya okubandakanya i-cadavers yabantu kunye nezilwanyana. I-Biomechanics isifundo somzimba womntu kunye nendlela eziphatha ngayo. Iiyunivesithi zaqhutyelwa phambili uphando lwe-biomechanical zisebenzisa iivolontiya zabantu eziphilayo kwezinye izilingo ezilawulwayo. Ngokomlando, imboni yecandelo lezemoto liye lavavanya iinkqubo zokuzikhusela zisebenzisa uvavanyo lokuvolontiya nabantu.
Iminyaka engamashumi amabini edlulileyo, ukuphuhliswa kwe-Hybrid III kwenzelwe ukupasa ukuqhubela phambili ukuqhutyelwa kokuqhuma kwamandla kunye nemiphumo yokulimala komntu. Zonke iimvavanyo ze-crash zokuqala, kunye ne-GM Hybrid I kunye ne-II, azikwazi ukubonelela ngokufanelekileyo ukuguqulela idatha yokuvavanya kwizinto zokunciphisa ukonakaliswa kwemoto kunye namaloli. Ukuhlolwa kokuqala kokuhlaselwa kwamathambo kwakubonakele kwaye kwakunenjongo elula - ukunceda unjiniyela kunye nabaphandi baqinisekise ukuphumelela kwezibambiso okanye amabhande okukhusela.
Ngaphambi kokuba i-GM iqhube i-Hybrid I ngo-1968, abakhiqizi beemveliso babengenayo indlela eqhubekayo yokuvelisa izixhobo. Isisiseko esisisiseko kunye nobukhulu bezitho zomzimba zisekelwe kwizifundo ze-anthropological, kodwa iidummy zazingavumelaniyo kwiyunithi ukuya kwiyunithi. Inzululwazi ye-anthropomorphic dummies yayisemncinci, kwaye umgangatho wabo wokuvelisa uhlukile.
Kwiminyaka engama-30 eyadlulayo, abaphandi be-GM badala i-Hybrid I ngokudibanisa iindawo eziphambili kwiimbumba ezimbini zokuqala. Ngowe-1966, ii-Alderson Research Laboratories zenze i-VIP-50 i-GM ne-Ford. Kwakusetyenziswe kwakhona yi-National Bureau of Standards. Lo kwakuyi-dummy yokuqala eyenziwe ngokukodwa kwi-auto industry. Emva koko, ngo-1967, i-Sierra Engineering yazisa uSier Stan, umzekelo wokukhuphisana. Abanonjiniyela beGM abanelisekanga, abazenzayo i-dummy ngokudibanisa iimpawu ezibalulekileyo zezo zombini - ngoko ke igama elithi Hybrid I.
UMG wasebenzisa le modeli ngaphakathi kodwa wabelana ngokuyila kunye nabaqhubi kwiintlanganiso zeekomiti ezikhethekileyo kwi-Society of Automotive Engineers (SAE). I-Hybrid ndandihlala ihlale ihlala kwaye iveliswe iziphumo eziphinda ziphinda ziphinda ziphindwe.
Ukusetyenziswa kwezi ngqungquthela zangaphambili kwathathwa yi-US Air Force yokuvavanya okwenziweyo ukuze kuphuhliswe kwaye kuphuculwe ukulungiswa kovavanyo kunye neenkqubo zokukhangela. Ukususela kwiminyaka emashumi amabini ezelwe kwiminyaka emashumi amahlanu, umkhosi wasebenzisa i-crash test dummies kunye neengxaki zokuhlaselwa ukuvavanya iindidi zezicelo kunye nokunyamezela kwabantu kwingozi. Ngaphambili basebenzise amavolontiya abantu, kodwa ukunyuka kwemigangatho yokhuseleko kufuna iimvavanyo ezikhawulezileyo, kwaye isantya esiphezulu sasingekho sikhuselekile kwizifundo zabantu. Ukuvavanya i-harnesses-strown-freraint harnesses, esinye isantya esiphezulu siphezulu sasiqhutywe ngeenjini ze-rocket kwaye siphuthuma ukuya kuma-600 mph uColonel John Paul Stapp wabelana ngemiphumo yocwaningo lwe-Air Force e-crash-dummy ngo-1956 kwinkomfa yokuqala yonyaka ebandakanya abenzi bezithuthi.
Kamva, ngowe-1962, i-GM Proving Ground yazisa yokuqala, imoto, i-impact sled (i-HY-GE). Kwakunokukwazi ukufanisa ukutshatyalaliswa kwamanqwanqwa okutshatyalaliswa okwenziweyo okuveliswa yimoto epheleleyo. Kwiminyaka emine emva koko, ngo-1966, i-GM Research yaqala indlela echanekileyo yokumisela ubungakanani bengozi eyingozi eveliswa xa kulinganiswa nempembelelo yeempembelelo ze-anthropomorphic dummies ngexesha leemvavanyo zelabhoratri.
Okumangalisayo kukuba, kwiminyaka engamashumi amane edlulileyo, imboni yezemoto iye yavelisa abavelisi beenqwelo-moya ngokukhawuleza kwezobuchwepheshe.
Ngoku kutshanje njengama-1990s, abenzi be-automakers basebenze kunye ne-aircraft ye-aircraft ukuba baqhubele phambili ukukhawuleza ngokuqhubela phambili ekuvavanyweni kokuphazamiseka njengoko kuhlobene nokunyamezela kwabantu kunye nokulimala. Amazwe e-NATO anomdla ngokukhethekileyo ekuphenyweni kwee-automobile ngenxa yokuba kukho iingxaki kwi-helicopter ukuphazamiseka kunye ne-speedjj ejections zabaqhubi. Kwakucatshulwa ukuba idatha yedatha ingancedisa ukwenza iinqwelo ezikhuselekileyo.
Xa iNkcazo yadlulisela uMthetho weSizwe weZithuthi kunye noMthetho woKhuseleko loThutho ka-1966, ukuyila nokuveliswa kwemoto kwaba yoshishini elilawulwayo. Ngokukhawuleza emva koko, ingxoxo yaqala phakathi koorhulumente kunye nabanye abavelisi malunga nokuthenjwa kwezixhobo zokuvavanya ezifana ne-crash dummies.
I-National Highway Safety Bureau yafuna ukuba i-Alderson ye-VIP-50 yedummy isetyenziswe ukuqinisekisa ukulungiswa kweenkqubo.
Bayafuna i-mile-nganye ngeyure, iimvavanyo zokukhawulela kwindonga eqinile. Abachasayo bathi iziphumo zophando ezifunyenwe ekuvavanyeni ngolu vavanyo lwe-crash test dummy aluzange ziphinda ziphinda zibonwe kumbono wokwenza izinto kwaye zazingachazwanga kwiimpawu zobunjineli. Abaphandi abanakho ukuthembela ekusebenzeni okuqhubekayo kweeyunithi zokuvavanya. Inkundla zaseburhulumenteni ziyavumelana nalaba bahlalutyi. UMG akazange enze inxaxheba kumbhikisho osemthethweni. Kunoko, i-GM iphuculwe kwi-Hybrid i-crash test dummy, ukuphendula kwimicimbi eyavela kwiintlanganiso zekomiti ye-SAE. I-GM yavelisa imidwebo echaza ukuhlolwa kwe-crash test kunye nokudala iimvavanyo zokulinganisela eziza kubeka umgangatho wokusebenza kwayo kwindawo yokulawulwa kwebhubhoratri. Ngomnyaka we-1972, i-GM yanikezela imidwebo kunye nokulinganiswa kwabakhiqizi bamashishini kunye noorhulumente. Uvavanyo olutsha lwe-GM Hybrid II lwe-crash test lugxile inkundla, urhulumente, abavelisi, kwaye yaba ngumgangatho wokuvavanywa kwangaphambili kwe-crash ukuthobela imimiselo ye-automotive yase-US yokukhusela iinkqubo.
Ifilosofi ye-GM isoloko ikwabelana ngokutsha kwezinto zokuhlaziya i-crash test ezintsha kunye nabathengiselwano kwaye ayifumani nzuzo kwinkqubo.
Ngomnyaka we-1972, ngelixa i-GM yabelana ngeHybrid II kunye noshishino, iingcali kwi-GM Research zaqala umgudu wokuqhekeka komhlaba. Injongo yabo yayikukuhlakulela i-dshmy yokuhlaselwa kwe-crash ebonakaliswe ngokuchanekileyo kwi-biomechanics yomzimba womntu ngelixa isithuthi sengozi.
Oku kuya kuthiwa yiHybrid III. Kutheni le nto yayimfuneko? UMG wayesele eqhuba iimvavanyo ezigqithiseleyo iimfuno zikaRhulumente kunye nemigangatho yabanye abakhiqizi basekhaya. Ukususela ekuqaleni, i-GM yavelisa nganye yee-crash dummies ukuphendula kwisidingo esithile somlinganiselo wokuvavanya kunye noyilo lokhuseleko oluphuculweyo. Iinjineli zifuna idivaysi yokuvavanya eya kubavumela ukuba bathathe amanyathelo kwiimvavanyo ezizodwa eziye zaphuhliswa ukuphucula ukhuseleko lwezithuthi ze-GM. Injongo yeqela le-Hybrid III yayikuhlakulela isizukulwana sesithathu, i-crash test dummy ephendule iimpendulo zayo zifuphi kwi-biomechanical data ngaphezu kwe-Hybrid II test test dummy. Iindleko zazingekho umcimbi.
Abaphandi bafunda indlela abantu abahlala ngayo kwizithuthi kunye nolwalamano lwabo lokuma kwimeko yabo. Bazama kunye nokutshintsha iimpahla zokwenza i-dummy, kwaye baqwalaselwe ukufaka izinto zangaphakathi ezifana ne-cube cage. Ubunzima bezinto ezibonisa idatha ye-biomechanical. Ukuchaneka koomatshini bokulawula oomatshini kwakusetyenziselwa ukwenza i-dummy ephuculweyo rhoqo.
Ngowe-1973, i-GM yabamba i-seminar yokuqala yehlabathi kunye neengcali ezikhokelayo zehlabathi ukuxubusha iimpawu zempendulo zabantu.
Yonke inxaxheba yangaphambili yolu hlobo yayijolise ekubizeni. Kodwa ngoku, i-GM yayifuna ukuphanda indlela abantu abayiphendule ngayo ngexesha lokuphazamiseka. Ngaloo ngqiqo, i-GM yavelisa i-crash dummy eziphatha kakubi ngakumbi kubantu. Esi sixhobo sinikezele ngolwazi oluninzi olubalulekileyo lweet lab, olwenza ukuba utshintsho lwamacebo olwenziwe lunokunceda ukunqanda ukulimala. UMG uye waba yinkokeli ekuphuhliseni ubuchwepheshe bokuhlola ukubanceda abenzi beefowuni bazikhusele iimoto kunye namaloli. I-GM iphinda ixubene nekomiti ye-SAE kulo lonke uphuhliso lwenkqubo ukuqokelela igalelo esuka kubakhiqizi bamashishini kunye nabenzi bemoto ngokufanayo. Ngonyaka kuphela emva kokuqalisa kophando lwe-Hybrid III, iMG iphendule kwisivumelwano sombuso kunye ne-dummy ecacisiweyo. Ngomnyaka we-1973, i-GM yenze i-GM 502, eyayiboleka ngolwazi lwangaphambili iqela lokuphanda elifundile. Kwakuquka ukuphucula emva kweso sithuba, intloko entsha, kunye neempawu ezihlangeneyo.
Ngowe-1977, i-GM yenza i-Hybrid III ithengiswe ngokuthengisa, kubandakanywa zonke izixhobo ezintsha ze-GM zenze uphando kwaye zaphuhliswa.
Ngomnyaka we-1983, i-GM yathintela uLawulo lwezokuPhepha koThutho lweSizwe (NHTSA) ukuze imvume yokusebenzisa i-Hybrid III njengesixhobo sokuhlola esinye ukuthotyelwa kukaRhulumente. UMG wanikezela nezo shishini kunye neethagethi zalo zokwenziwa komsebenzi owamkelekileyo ngexesha lokuvavanya ukhuseleko. Ezi thagethi (amaxabiso okuHlola okuKhuseliswa koKhuseleko) zazibalulekileyo ekuguquleleni idatha ye-Hybrid III ekuphuculeni ukhuseleko. Emva koko ngo-1990, i-GM yabuza ukuba i-Hybrid III dummy ibe yinkqubo yokuvavanya kuphela eyamkelekileyo ukuhlangabezana neemfuno zikaRhulumente. Ngonyaka kamva, i-International Standards Organisation (ISO) yadlulisela isisombululo esifanayo sokuvuma ukuphakama kwe-Hybrid III. I-Hybrid III ngoku iyimilinganiselo yokuhlolwa kwempembelelo yangaphambili. Enyanisweni, ngoSeptemba 1, 1997, iba yipropati yokuvavanya yempembelelo yecandelo elilodwa elijongene nokuhlolwa kokuthotyelwa komsebenzi kwi-FMVSS208. Kwaye i-Hybrid III iye yonyulwa njengesixhobo sokuvavanya ngokusemthethweni kwiishedyuli zomgaqo-nkqubo omtsha we-Yurophu ukuqala ukusebenza ngo-Oktobha 1998.
Kule minyaka, i-Hybrid III kunye nezinye izidumbu ziye zafumana uninzi lweziphuculo kunye nezinguqu. Umzekelo, i-GM yavelisa ingeniso ephosakeleyo esetyenziswa ngokuqhelekileyo kwiimvavanyo zoPhuhliso lweMG ukubonisa nayiphi na intambo yebhanti kwi-pelvis kunye nesisu. Kwakhona, i-SAE idibanisa iitalente zeenkampani zenkampani, abaxhasi beempahla, abakhiqizi bamashishini kunye nee-arhente karhulumente wase-US kwimigudu yokubambisana ekuphuculeni i-test dummy.
Iprojekti ye-SAE yakutshanje ka-1966, ngokubambisana ne-NHTSA, inyuse i-ankle kunye ne-hip joint. Nangona kunjalo, abakhiqizi bezityalo baxhomekeke kakhulu ngokutshintshwa okanye ekuphuculeni izixhobo eziqhelekileyo. Ngokuqhelekileyo, umenzi wezithuthi kufuneka abonise okokuqala imfuno yovavanyo oluthile lokuphucula ukuphucula ukhuseleko. Emva koko, ngesivumelwano seshishini, ukuxhaswa kwamandla okutsha kunokongezwa. I-SAE isebenza njengendawo yokucoca i-technical to manage and minimize le nguqu.
Ngaba zichanekile kangakanani ezi zixhobo zokuhlola i-anthropomorphic? Eyona nto ibonakalayo, bayangqinela into eyenzeka ngokubanzi kwintsimi kuba akukho babini abantu bokwenene bafana ngesayizi, ubunzima okanye ubunani. Nangona kunjalo, iimvavanyo zifuna imilinganiselo, kwaye i-dummies zanamhlanje zibonakaliswe ukuba ziyabalula. Iingxaki ze-Crash-test dummies zihlala zibonisa ukuba imilinganiselo, iinkqubo ezintathu zokukhusela iindawo zokukhusela ziyimpembelelo enempumelelo kakhulu - kunye nedatha ifanele kakuhle xa kuthelekiswa nokuphazamiseka kwehlabathi langempela. Iibhanti zokukhusela zenza umonakalo wokufa kwabantu abaqhubekileyo ngama-42 ekhulwini. Ukongeza izikhwama zomoya kunye nokusetyenziswa kwebhanti olufanelekileyo kuphakamisa ukhuseleko kuma-47 ekhulwini.
Ukuhlolwa kwesikhwama se-Air ekupheleni kweminyaka engamashumi asixhenxe kudala esinye isidingo. Ngokusekelwe kwiimvavanyo ezinobunzima, iinjineli ze-GM zazizi ukuba abantwana nabancinci abahlala kwintsimi bangasengozini yokutshatyalaliswa kwezikhwama zomoya. Iingxowa zomoya kufuneka zithintele ngesivinini esiphezulu ukukhusela abahlala kwindawo ephazamisayo-ngokoqobo ngaphantsi kwe-blink yesiso. Ngowe-1977, i-GM yavelisa i-bag air air dummy. Abaphengululi balinganisa i-dummy ngokusebenzisa idatha ehlanganiselwe kwisifundo esichaphazela izilwanyana ezincinci. ISebe lePhando loMzantsi-ntshona lenze lo vavanyo ukuqonda ukuba zeziphi iziphumo ezinokuthi zigcinwe ngokuphepha. Kamva i-GM yabelane ngolwazi kunye noyilo ngokusebenzisa i-SAE.
I-GM nayo yayidinga ifowuni yokuvavanya ukulinganisa ibhinqa elincinci ukuvavanywa kweebhegi zomoya. Ngowe-1987, i-GM idlulisele iteknoloji ye-Hybrid III kwi-dummy emele i-5 ye-female percentile.
Kwakhona ngasekupheleni kweminyaka yama-1980, iZiko loLawulo lweZifo lakhupha isivumelwano kunye nosapho lwe-Hybrid III dummies ukukunceda ukuvavanya ukungathinteli. IYunivesithi yase-Ohio State yanqoba isivumelwano kwaye yafuna uncedo lwe-GM. Ngokubambisana nekomiti ye-SAE, i-GM ibe negalelo ekuphuhliseni i-Hybrid III Dummy Family, eyayiquka indoda engama-95 ye-percentile, ibhinqa elincinci, uneminyaka emithandathu ubudala, umntwana oneminyaka emithandathu ubudala, kunye nomntwana oneminyaka emithathu ubudala.
Ngamnye ubugcisa be-Hybrid III.
Ngo-1996, i-GM kunye noChrysler kunye neFood baba nexhala malunga nokunyuka kweengxowa zomoya kunye nokunyanzelisa urhulumente ngokusebenzisa i-American Automobile Manufacturers Association (AAMA) ukujongana nabahlali besikhundla ngexesha lokuthunyelwa kwesikhwama somoya. Injongo kukuphumeza iinkqubo zokuvavanywa ezivunywe yi-ISO - ezisebenzisa i-dummy encinci yebhinqa yokuvavanywa kwamacala okuqhuba umqhubi kunye neentlum ezineminyaka emithandathu kunye neyesithathu, kunye ne-infant dummy yebala. Ikomiti ye-SAE igqibile ukusebenza ngoku kutshanje ukuphuhlisa uluhlu lwamabhinqa ezincinci kunye nabavelisi bezixhobo ezihamba phambili, iiNkqubo zoKhuseleko zoLwazi lweNkcazo. Umntwana oneminyaka engama-6 ubudala, oneminyaka eyi-12 ubudala, kunye nezidumem zenyanga ezili-18 sele zikhona ukuvavanya ukusebenzisana kweengxowa zomoya kunye nokuthintela kwabantwana. Eyaziwayo njenge-CRABI okanye i-Child Restraint Air Bag Ukusebenzisana kwama-dummies, zinceda ukuvavanywa kwezilwanyana ezincinci ezijongene nazo emva kokuba zibekwe ngaphambili, isihlalo somgibeli esixhaswe ngesikhwama somoya. Ubuninzi bobuninzi beentlobo kunye neentlobo, ukusuka kwi-encinci - ukuya kwi-average-enkulu kakhulu, vumela uMG ukuba aphumeze umthamo omkhulu weemvavanyo kunye neentlobo ze-crash. Uninzi lwale mvavanyo kunye novavanyo alugunyazisiweyo, kodwa i-GM iqhuba rhoqo iimvavanyo ezingafunwa ngumthetho.
Ngee-1970, iimvavanyo zecala-impembelelo zazifuna enye inguqu yezixhobo zokuvavanya. I-NHTSA, ngokubambisana neCandelo lePhando lezoPhuhliso leYunivesithi yaseMichigan, lenze i-dummy okanye i-SID echaphazelekayo. Abantu baseYurophu badala i-EuroSID eyona nto. Emva koko, abaphandi be-GM benza iminikelo ebonakalayo ngokusebenzisa i-SAE ekuphuhlisweni kweso sixhobo se-biofidelic esibizwa ngokuthi yi-BioSID, esetyenziswa ngoku ngokuphonononga kuphuhliso.
Ngama-1990, imboni ye-auto yase-United States yayisebenza ukwenza ikhethekileyo, i-small dummy indawo yokuvavanya ingxowa yomoya. Ngokusebenzisa i-USCAR, i-consortium eyenzelwe ukwabelana ngobuchwepheshe phakathi kwamashishini athile kunye namasebe karhulumente, i-GM, i-Chrysler kunye ne-Ford ngokudibeneyo iphuhlise i-SID-2s. I-dummy ixelisa amantombazana amancinci okanye abancinci kwaye inceda ukulinganisela kwabo ukunyamezela kwempembelelo yecala yomoya.
Abavelisi base-US basebenzisana noluntu lwamazwe ngamazwe ukuseka le sixhobo esincinci, esinempembelelo yecala njengesiqalo sokuqala komntu omdala okumele sisetyenziswe kumgangatho wamazwe omgangatho wokulinganisa ukusebenza komgangatho. Bakhuthaza ukwamkelwa kwemigangatho yokhuseleko lwamazwe ngamazwe, kunye nokuvumelanisa ukwakha ukuvumelanisa iindlela kunye neemvavanyo. Icandelo lezimoto lizinikezele kakhulu kwimigangatho ehambelanayo, iimvavanyo kunye nezindlela njengoko izithuthi ezininzi kunye nezithengiswa kwiimarike zehlabathi.
Liliphi ikamva? Iimpawu zeMathematika zeGM zinika idatha ebalulekileyo. Ukuvavanywa kweMathematika kuvumela ukuba kuqhutywe ngaphezulu kwexesha elifutshane. Ukuguqulwa kweMG ukusuka kwi-mechanical to electronic sensors caps kwakha ithuba elihle. Iinkqubo zeengxowa zomoya zangoku kunye nezayo ziya kuba neefowuni "zokurekhoda zendiza" njengenxalenye yesistim zabo. Imemori yekhompyutheni iya kubamba idatha yenkalo kwimeko yesiganeko kunye nolwazi lwe-crash ye-crash engakafiki. Ngalo datha yedatha yenkcubeko, abaphandi baya kukwazi ukuqinisekisa iziphumo zebhu kunye nokuguqula i-dummies, i-computer-simulations kunye nezinye iimvavanyo. "Umgwaqo omkhulu uba yilebhu yokuvavanya, kwaye yonke into eyenzekayo iya kuba yindlela yokufunda ngakumbi malunga nokukhusela abantu," watsho uHarold 'Bud' Mertz, okhuseleko lweM GM kunye neengcali ze-biomechanical. "Ekugqibeleni, kusenokwenzeka ukuba udibanise ukurekhoda kwee-crash kuzo zonke izithuthi," wongezelela.
Abaphandi be-GM bahlaziya rhoqo yonke imiba yeemvavanyo zokuphazamiseka ukuphucula iziphumo zokhuseleko. Ngokomzekelo, njengoko iinkqubo zokuzikhusela zikunceda ukuphelisa ukonakaliswa kwamanqanaba angaphezu kwezinto ezingaphezulu, iinjini zokhuseleko ziyaqaphela ukukhubaza ukukhathazeka komlenze ongezantsi.
Abaphandi be-GM baqala ukuyila iimpendulo ezingcono ezisezantsi zomlenze. Baye bongeza "isikhumba" ezintanyeni ukugcina iingxowa zomoya zingaphazamisa intamo ye-vertebrae ngexesha lovavanyo.
Ngolunye usuku, kwikhompyuter kwikhompyutheni "i-dummies" inokuthi ithathelwe indawo ngabantu abangqinileyo, ngeentliziyo, imiphunga kunye nezinye izitho ezibalulekileyo. Kodwa akunakwenzeka ukuba ezo zimo zekhompyutha ziza kuthatha indawo yento yangempela kwixa elizayo. I-Crash dummies iya kuqhubeka nokubonelela abaphandi be-GM kunye nolwazi olumangalisayo kunye nolwazi malunga nokukhuselwa kokuhlaselwa kweminyaka emininzi.
Siyabonga ngokukhethekileyo kuClaudio Paolini
Ngubani owasungula imoto?
Imbali ye-Chapstick - Imbali yeCarmex
I-Dybbuk kwi-Jewish Folklore
Umphambukeli weNyaniso: U-Abolitionist, uMphathiswa, uMfundisi
I-Beatles, i-Universal, neCalderstone
'I-Santa Claus ifika kwiChords
Uqhagamshelwano phakathi koKholo kunye noTysthi, inkolo, ukukholelwa kuThixo
I-New York Institute of Technology i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data